Ruushka - ALinks
Maqaallada ku saabsan Ruushka
Isbitaalada Ruushka, hage deg deg ah oo loogu talagalay isbitaalada Ruushka
December 14, 2020 Antika Kumari caafimaadka, Russia
Ugu horreyntii, Ruushka, waxaad wici kartaa 103 xiriir toos ah oo ku saabsan ambalaaska caafimaadka degdegga ah. Dhammaan hawlwadeennada waxay ku hadlaan Ruush sidoo kale waa inay awoodaan inay ku hadlaan Ingiriisiga, ku soo qabtaan af Ruush hareerahaaga haddii aad halgameyso
Sida Loo Raadsado Shaqada Dalka Ruushka
November 25, 2020 Antika Kumari shaqo, Russia
Ruushka wuxuu leeyahay fursado shaqo oo kaladuwan, badiyaaana kuwa ugu mushaharka badan waa qurbajoogta. Dadka ajaanibta ah ee ka shaqeeya Ruushka waxay ku jiraan kaalinta 13-aad liiska dadka daqliga badan soo galo sanadka 2014. Dhamaan dadka ajaanibta ah ee doonaya inay ka shaqeeyaan Ruushka waa inay
Sidee Hindidu u heli doontaa Fiisaha Ruushka?
October 30, 2020 Shubham Sharma Hindiya, Russia, safarka, fiisada
Dalbashada fiiso si aad u booqato Ruushka kana timaaddo Hindiya maahan wax dhib badan habka loo arko. Qodobkaan, waxaad ku ogaan doontaa macluumaad buuxa oo ku saabsan Visa-ka Ruushka ee Hindida. Waxaad halkan ka heli doontaa: Kala duwan
September 10, 2020 Antika Kumari Russia, safarka, fiisada
Fiisaha Ruushka waa ogolaansho qaab istiikar ah oo ku lifaaqan baasaboor dadka safarka ah. Waxay awood u siisaa qofka haysta inuu ku biiro, ku noolaado, kana tago Ruushka waqti cayiman. Waxaa ku jira faahfaahin sida: Galitaanka iyo bixitaanka
Qaacitaannada Ugu Badan ee Loo Isticmaalo Gaadiidka Ruushka
Waxaa laga yaabaa 17, 2020 Antika Kumari soo qaado, Russia, safarka
Russia waa wadan aad u balaaran oo masaafo aad u balaaran leh, laakiin xitaa hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee aad ku timaado Russia, helitaanka meesha aad rabto kaligaa ma adka. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad qorsheyso jidkaaga, sidii meel kasta oo aadan aqoon
Sida loo baran karo Ruushka: Tilmaanta Tallaabo-Talaabo
April 28, 2020 Antika Kumari Russia, waxbarasho
Haddii aad rabto inaad wax ku barato Ruushka, dooro waxa iyo meesha aad rabto inaad wax ku barato. Sidoo kale, hubi haddii aad ugu baahan tahay koorso u diyaar garow ah Afkaaga sababtoo ah koorsooyinka badankood waxay ku baxaan luqadda Ruushka. Markaad go’aansato midkee
Fiiri Sida Loo Dalbado Magangalyo Ruushka?
April 24, 2020 Shubham Sharma qaxootiga, Russia
Ka soo qaad inaad rabto inaad magangalyo ka dalbato Ruushka, markaa waa inaad u tagtaa FMS. Sidoo kale, Adeegga Socdaalka ee Federaalka (FMS) waa hay'adda kaliya ee Ruushka ka shaqeysa arrimaha qaxootiga. Inaad hesho sharci qaxootinimo ama aad ku hesho magangalyo kumeelgaar ah Ruushka.
April 17, 2020 Antika Kumari Russia, waxbarasho
Hagaha Nidaamka Waxbarashada Ruushka
March 1, 2020 Maitri Jha Russia, dugsiga
Ruushku waa meel qurux badan oo lagu noolaado iyo haddii aad u soo guurto Russia intii aad ahayd inaad ka walwasho waxbarashada iyo iskuulka ilmahaaga. Nidaamka waxbarashada Ruushka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood oo kala ah Dugsiga barbaarinta, Dugsiga Hoose iyo Sare.